Fanalana ny fakon’Antananarivo Misy vokany ny fanampian’ny CUA ny SAMVA
Efa hita taratra ny vokatry ny hetsiky ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), taorian'ny toromarika nomen'ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana,
sy ny mpanolotsaina manokan'ny ben'ny tanàna Marc Ravalomanana ny fiandohan’ity herinandro ity ny amin'ny fanadiovana ny tanàna sy fanalana ny fako eto amin'ny tanànan'Antananarivo Renivohitra, tamin'ireo mpiasan'ny CUA. Kamiao maromaro no anampian’ny CUA ny SAMVA ho fanalana ny fako, misy ihany koa “tractopelle”, ka andro aman’alina no anatanterahana ny asa. Arahina ny asa tanamaro (HIMO) izany araka ny toromariky ny mpanonolotsaina manokana Marc Ravalomanana ihany, teny amin'ny boriborintany faha-2 ka omaly 28 novambra tao Ambohipo nametrahana ireo fako misavovona tao anaty bakan-jaoridira, izay miandry ny fiaraben'ny SAMVA haka azy, dia niara-nisalahy nanatanteraka ny asa teny an-toerana ny mpanolotsaina ny tanànan’Antananarivo sy ny ekipa mpanadio ao amin’ny boriborintany faha-2 ary ireo mpomba an’Andriamatoa Marc Ravalomanana teny an-toerana. Ho hentitra ny tanànan'Antananarivo ho an'ireo minia manary fako amin'ny fotoana tsy tokony hanariana azy, ka hisy ny sazy miandry azy ireo. Ny fanariana fako dia manomboka amin'ny 5 ora hariva ka hatramin'ny 8 ora alina ihany. Marihana fa manampy ny SAMVA aloha ny CUA ankehitriny, fa ny faktioran’ny vola lany rehetra amin’izao asa fanampiana ataon’ny kaominina izao dia oneran’ny minisiteran’ny rano sy ny SAMVA ihany avy eo rehefa mivoaka ny volan’izy ireo avy amin’ny fanjakana foibe.